Le nkonzo online free. calculator imithi
Ukubalwa umthamo imithi wagawulwa
Khetha data soqupho ukubalwa
Inani iziqwenga N
Ubungakanani nganye cubic E
Ixabiso 1 cubic meter
ukubalwa imithi wagawulwa
W - Ububanzi beplanga
H - ibhodi nezinyuko
L - Ubude iiplanga
N - Inani iziqwenga
E - Ubungakanani nganye cubic
Abaninzi ekwakhiweni ekhayeni lakho okanye iibhate bejamelene imfuneko ukubala kufuneka ukuba amaplanga yimalini ngenxa yomsebenzi. Ukumisela kufuneka kangakanani ukuba akhwele okanye umqadi, ngokulula. Kodwa ixabiso imithi idla elikhankanyiweyo cubic metre, kwaye kule meko ke nelula ukusebenzisa yokubala ucwangciso olukhethekileyo. Ngokusebenzisa site wethu, ukwazi ubude, ububanzi nezinyuko lebhodi, ngokunjalo inani ngamaqhekeza, uya kuba nako ukubala ukuba zingaphi cubic metres imithi kuya kufuneka wena ukuba oko kuyingozi semitha enye cubic okanye kweplanga inye.
imithi ngeesarha zibizwa njalo ngenxa yokuba efunyenwe namarhela ye evele emthini. kusarha ezisetyenziselwa ukwakha, ifenitshala, iintlobo kokupakishwa nezinye iimveliso. Namhlanje, olu hlobo zokwakha yeyona ithandwayo. Wood kusetyenziselwa ukwenza imithi yeyona yokukhusela obalaseleyo, igcina ukufuma ezinzileyo kwaye ifuna akukho unyango olulodwa kunye nokhathalelo, nto leyo eyenza kube ingakumbi ezingafanelekileyo.
Libhekisela imithi ngeesarha, ibhodi mbini, unedged, kaloliwe ukwakha. Bruce nto nemithi, oluvela macala onke. Njengoko ogqobhozela isikwere okanye olubuxande emnqamlezweni. Nemithi ixhaphakileyo ezisetyenziswa ukwakhiwa kwezindlu, amadama kunye noqulunqo emgangathweni.
Ukucanda Sihamba iplanga ubhetyebhetye ukuba belizwe zisetyenziswa kumsebenzi wokwakha ngaphandle kwesakhiwo, kwaye ukuyilwa isithuba ngaphakathi. Ukucanda ibhodi umnqamlezo-candelo yinto uxande evuthelweyo. ibhodi Unedged kwahlukile nodonga ukuba emiphethweni yayo uyinqumle, ukwenzela ukuba uhlala umaleko ebonakalayo zemithi amaxolo, apho oku kwibhodi cut. Ukwakha kaloliwe okanye ibha isitena, esincinane cross-icandelo kunesiqhelo, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi yokwakha.
imithi besarhwa zahluke uhlobo, ezenziwe. Benza ukuba imithi emibhumbulu, ezifana nompleyini nespruce kunye larch. Kunye umthi, ezifana oki, yibeech, emide, Aspen.
Kukho imithi njengoko ukufuma. Zahlula-hlulwe ekrwada kunye namanqanaba ukufuma kwama-22 ekhulwini ngalinye kwaye owomileyo nokufuma ngezantsi-22 ekhulwini. Okokuqala ezisetyenziselwa umsebenzi wokwakha, yaye le yokugqibela ukuze imveliso ifanitshala.
Kukho kwakhona iintlobo ezininzi imithi. kwibakala Choice kuxhomekeke kwisicelo. Ngoko, kuba zefanitshala izixhobo kwibakala zisetyenziswa ephakamileyo. Kuba joinery kunye ngqameko ezifanelekileyo kumabanga imithi 1 no-2 no-3 kwibakala isetyenziswa kuphela xa ibhodi lokwakha.
Lumber, ukuba abayi zisetyenziswa ixesha elide, kufuneka ukhuselwe ukufuma. Oku kunokukhokelela kwanokubola. Ayikhuthazwa ukuba ukugcina imithi eDibanisa phezu kwezinye. Phakathi esicwangciswe iibhodi okanye neeplanga kufuneka ngokubekwa.